ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာ​ရေး » ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့လေ့လာချက်အရ မိသားစုနဲ့အတူတူလက်ဆုံစားတဲ့ကလေးတွေဟာ အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေး၊ ကိုယ်ဝန်ရခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းနဲ့ အစားအသောက်မူမမှန်ခြင်းစတာတွေ ဖြစ်တာနည်းတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လက်ဆုံစားကြတဲ့ကလေးတွေမှာ ဝေါဟာရပိုမိုကြွယ်ဝခြင်း၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသုံးခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်း စတာတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး လေ့လာမှုကတော့ မီချီဂန်တက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်ပါ။ ၁၉၈၁ နဲ့ ၁၉၉၇ခုကြား အမေရိကန်ကလေးတွေ သူတို့မိသားစုနဲ့ အချိန်ဘယ်လိုဖြုန်းတယ်ဆိုတာကို လေ့လာခဲ့ကြပြီး အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ ထမင်းအတူတူစားပြီး အချိန်ကုန်ကြတဲ့ကလေးတွေဟာ ပညာရေးမှာပိုထူးချွန်ကြပြီး အပြုအမူတွေလည်း ပိုပြီး ယဉ်ကျေးကြတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ထမင်းစားချိန်ဟာ ကျောင်းမှာ စာသင်နေတဲ့အချိန်တွေ၊ ဘာသာရေးကျောင်းတွေတက်နေရတဲ့အချိန်တွေ ဒါမှမဟုတ် အားကစားလုပ်ချိန်တွေထက် ပိုပြီး လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
ညစာအတူတူစားဖို့ သင့်မိသားစုအတွက် အဆင်မပြေနေဘူးလား။ ညစာအတူတူစားရမှ (ညစာစားချိန်မှ)လို့ မဆိုလိုသလို ညတိုင်းဒီလိုဖြစ်နေရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုဘူးလေ။
ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖေးမတာပါ။ ဒီကနေပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံကြသလဲဆိုတာ ဖြစ်လာတာပေါ့လို့ နယူးယောက်ခ်မြို့ရဲ့ မိသားစုဆိုင်ရာ၊ relationship ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဖြစ်သူ တစ်ဖြစ်လဲ The Learning Channel’s Shalom in the Home အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တဲ့ Rabbi Shmuley Boteach က ဆိုပါတယ်။
သူက “ မိသားစုဝင်တွေကြားက ဆက်နွယ်မှုတွေကို သရုပ်ခွဲကြည့်ရတာ ပျော်စရာပါ” လို့လည်းဆိုပါသေးတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ သူဟာ ကလေး ရှစ်ယောက်ဖခင်ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ “မိဘတွေကအိမ်ပြန်လာတယ်၊ ကလေးတွေကလည်း မိဘတွေကို ကြည့်ရတာပျော်တယ်လေ.. ပြီးတော့ ကလေးတွေ အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါလည်း မိဘတွေက သူတို့လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပျော်ရတာပါပဲ” လို့ဆိုပါတယ်။
Positive Coaching Alliance ကို တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ Jim Thompson ကတော့ ကလေးတွေ အားကစားနဲ့ထိတွေ့လာကြတဲ့အချိန် ၊ အားကစားကို စိတ်ပါလာကြတဲ့အချိန်မှာတော့ မိဘတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တွေ ရှိလာပါပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ကစားပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကလေးတွေရဲ့အမှားကို ထောက်ပြပြစ်တင်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီလိုပြောကြည့်ပါ။ “ သားကဒါကိုတော့ မရလိုက်ဘူးကွာ။ ဒါပေမဲ့ သားဟာ လွယ်လွယ်အရှုံးပေးတတ်တဲ့သူမဟုတ်တာ ဖေဖေတို့သိတာပေါ့” ဆိုတာမျိုးပေါ့။
သူတို့ရဲ့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အကြောင်းလေးတွေ၊ ရိုးရာလေးတွေကို သိထားတဲ့ကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမြင့်မားပြီး ဘဝကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ်ပိုမြင့်မားပါတယ်။
တနင်္ဂနွေညတိုင်းမှာ ညနေစာအတွက် Pancakes လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့အချိန်တိုင်း၊ တစ်နေရာရာသွားလို့ပြန်လာချိန်တိုင်း အမှတ်အသားစကားလေးတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအပြုအမူလေးတွေက မထင်ထားရလောက်အောင် မိသားစုကြားက နှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေပါတယ်။
“ အိမ်ရဲ့ရိုးရာဓလေ့လေးတွေဟာ ကလေးတွေအတွက် သူတို့ဟာဘယ်သူလဲ၊ ဘာအတွက်သူတို့နေနေတာလဲ၊ သူတို့နေရာက ဘာလဲဆိုတာတွေကို ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်စေတယ်လို့ The Happy Family: Restoring the 11 Essential Elements That Make Families Work ကို ပူးတွဲရေးသားသူ Richard Eyre က ဆိုပါတယ်။ “ ဒါတွေဟာ လူကြီးတွေအတွက်တော့ အရေးမပါပေမယ့် ကလေးတွေအတွက်ကတော့ အလွန်တရာအရေးကြီးပါတယ်”
နယူးယောက်ခ်ရဲ့ Syracuse တက္ကသိုလ်ရဲ့ စိတ်ပညာPhD, ပရောဖက်ဆာနဲ့ တာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ Barbara Fiese ကတော့ “ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုတွေမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ အခမ်းအနားလေးတွေ၊ သူတို့ကို စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေတဲ့ အခမ်းအနားလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။” ဆိုပြီး သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ သူမက “ စနေနေ့မနက်တိုင်း မုန့်လုပ်စားတာမျိုး၊ တစ်ပတ်မှာတစ်ညပီဇာစားကြတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် မိသားစု သီချင်းဆိုကြတာမျိုးလေးတွေက သင့်မိသားစုအတွက်တော့ အဖိုးဖြတ်မရတဲ့အရာတွေပါပဲ။ ဒီလိုအခမ်းအနားလေးတွေဟာ မိသားစုဝင်တွေကို ပိုပြီးရင်းနှီးစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူတို့တွေက ဒီလိုအချိန်တွေ အများကြီးကို အတူတူဖြတ်သန်းကြရတာမဟုတ်လား” လို့ဆိုပါတယ်။
စာရင်းကို ဇယားသုံးခုခွဲပြီး သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါ။ “လုပ်ရမယ့်အလုပ်”၊ “ လုပ်နေဆဲ” နဲ့ “လုပ်ပြီး” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်က အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် ပထမဇယားကွက်ထဲကနေ ဒုတိယအတါက်ကို ရွှေ့လိုက်ပါ။ စသဖြင့် စသဖြင့် အစီအစဉ်ချသွားပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခါတိုင်းလုပ်နေကျထက်ကို ၂ဆလောက်အလုပ်ပိုပြီး ပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ် လို့ Agile Manifesto ကို ပူးတွဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်တဲ့ Jef Sutherland က ဆိုပါတယ်။
17 Secrets of Happy Families. http://www.rd.com/advice/parenting/secrets-happy-families/
8 Secrets of Happy Families. http://www.parenting.com/article/8-secrets-of-happy-families
How To Have A Happy Family –7Tips Backed By Research. http://time.com/21296/how-to-have-a-happy-family-7-tips-backed-by-research/
4 Keys to BuildingaHappy Family. http://www.webmd.com/parenting/features/building-happy-family#3
15 Secrets of Happy Families. http://www.webmd.com/parenting/features/15-secrets-to-have-a-happy-family#2
သင့်ကလေး မိသားစုအပေါ် ပိုပြီး သံယောဇဉ်တွယ်လာအောင် ဘယ်လိုအရာတွေ အတူလုပ်ပေးသင့်လဲ